Mari itsva yejedhi muna 2022. Nhamba yemari yakadhindwa yakawanikwa in Ndira 2022.
Nhamba yepamusoro gumi yemari yakadhindwa yemari yakawanikwa pamari yemari yemadhora mumazuva apfuura.
Mari itsva ye digital in Ndira 2022
King Shiba (KINGSHIB) 14/12/2021
Iyo nyowani digital mari ndiyo yepamhepo service cryptoratesxe.com, iyo inoburitsa rondedzero ye mari yemadhora ichangobva kubuda, asi inotengeswa pamari inoshambadzira ye crypto.
Iyo "nyowani digital mari" webhusaiti online inoshandisa yakavhurika masosi kubva kune digital mari kuchinjanisa uye inogadzira chiyero cheiyo nyowani crypto munguva chaiyo.
Isu tinotsanangura mutsva wecrycurrency semari yakavakwa pamusoro peiyo nheyo yedigital crypto, asi isina kumbobvira yaonekwa pane yekutengeserana kwekutengeserana.
Cryptocurrensets inoratidzika nguva dzose, asi inotanga kutenderera pakati pevanhu kana kushandurwa kwekutengeserana kuchatanga kuitika. Kubvira panguva yekutengesa iyo yekutanga yekutengesa jozi, isu tinonyoresa digital mari nyowani uye tishambidze mune iyo mutsva weiyo mutsva mari yemadhora.
Kusiyana ne "Yenguva yemari yemadhora" sevhisi, iyo inoratidza mutengo wemari imwe yemari ichangobva kubuda digital mari, Cheapest digital digital money sevhisi inoratidza mutengo wemari yose iripo pamutengo wakaderera.
Iyo itsva digital mari, kunyange mune yekutanga yekutengesa chikamu, inogona kunge isiri iyo inodhura digital mari.
Rondedzero yemisi ichangobva kupfuura iyi mari yemadhora iri kungogara ichichinja. Kuonekwa kweshoko nyowani kunoitika kamwe chete pazuva kana kamwe chete pasvondo kana kamwe chete pamwedzi.
Shandisa yedu basa "mutsva digital mari" online uye mahara!
Iyo nyowani mari yemadhora ye Ndira 2022 se 19/01/2022 inomiririrwa nekusarudzwa kweavo gumi matsva ma-cryptos kurongedza kurongeka kubva kutsva kwazvo kuitira kukura kwezera.
Izvo zvitsva zvekristin zvinoratidzwa nenzira yemazuva ekutanga ekutengeserana kwekutanga kwemari iyi pane chero digital mari yekutsinhana munyika.
Rondedzero yeiyo nyowani mari yemadhora inoratidzwa nhasi kwe Ndira 2022.
Izvo zvinogoneka kuti mangwana digital mari nyowani ichaonekwa uye chiyero cheiyo nyowani mari yemadhora ichasiyana mangwana.
Gara uchishanyira webhusaiti yedu kune ruzivo rwekuziva nezve nyowani itsva mumashumiro eNewest mari yemadhora nhasi.
Mari itsva ye digital in 2022
Iwo matsva emakristcurrencies e 2022 ndeye mari yemadhora yakawonekera chete mu 2022.
Nyowani nyowani dzinowonekera kazhinji. Dzimwe nguva akati wandei mari yemadhora inogona kuoneka pazuva rimwe chete. Asi hunhu hwakakosha hunhu ndehwekuti iyi digital mari iri kutengeswa uye sei inoshingaira.
Sei isu tichida itsva digital mari isina kutengwa uye kutengeswa, izvo zvisiri kudiwa nemunhu?
Isu tinotsanangura mutsva mari yemadhora ye 2022 semari yemari yakanga isipo mu 2021, uye mu 2022 yakatengeswa. pane kuchinjana kamwe chete.
Isu tinofunga zuva rekuzvarwa kwe digital mari kuve zuva raakatanga kutengeswa paiyo digital mari exchange.
Kana mu 2022 pakanga pasina maambure ekutengesa e crypto pane chero chinjo munyika, saka isu hatisanganise iyo crypto mune rondedzero yemitsvagisheni itsva mu 2022.
New digital mari
Iyo itsva digital mari ndeye crypto, iyo isina kumbobvira yatengeswa pamitengo, asi trades pairi yakaitwa kanopfuura kamwe.
Vazhinji varidzi vezvemari vari kuyedza kutsvaga mitsva ye mari yemadhora. Simba rekutengesa reiyo nyowani mari yemadhora kazhinji rinowanzoita basa. Kana iwe ukajoinisa kutengesa kweiyo nyowani crypto, saka unogona kukwanisa kutenga kutenga pamutengo wakaderera kwazvo. Izvo zvinoitika kuti mwero weiyo itsva digital mari iri kukura zvakanyanya kuita basa.
Vagadziri vemari vanoshanda pamwe nevecrycurrencies dzimwe nguva vanowana mimwe mibairo. Asi njodzi yekudyara mari mune imwe nyowani digital mari yakakwira zvakare.
Izvo zvakakosha kuti uve mumwe wekutanga kuziva apo iyo nyowani yemari yakaonekwa pakutengesa kwe crypto.
Kune izvi, yedu online service "iyo nyowani digital mari" yakagadzirwa. Kushandisa iyo itsva digital mari basa ndeye mahara.
Itafura yemitsva yemakristini
Iyo tafura yemisi ichangobva kupfuura iyi mari yemadhora ndiyo fomu yedatabha rechinyorwa chedu chitsva cheiyo mari yemadhora.
Itafura yeiyo nyowani crypto inoratidza zita reiyo digital mari uye zuva rekutanga kuitengesa.
Paunodzvanya pane imwe yematsva emakristani ari mutafura, iwe unozoendeswa kune yakatsanangurwa peji peji yeiyi nyowani digital mari.
Chati yemitsva yemakristani
Iyo ichangoburwa digital mari chati ndeimwe bhenefiti yepamhepo pamhepo inoratidza iyo rondedzero uye mutengo weiyo mutsva mari yemadhora.
Iyo graph yeiyo itsva mari yemadhora inoratidza chiyero cheiyo yepamusoro gumi itsva crypto zvichienderana nemhedzisiro yekutengesa pane digital mari exchanges.